ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ရေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးတစ်ခု Google Search မှာရှာရင်း ဒါလေးကို တွေ့သွားတာပါ။ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ခုထိ ထွန်းကားနေဆဲဖြစ်တဲ့ ဆာဒူးယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ ၀တ်လစ်စလစ်ဂိုဏ်းဂဏထဲ ဗုဒ္ဓအရှင်ကိုပါ ထည့်သွင်းထားကို တွေ့လိုက်ရတော့ နည်းနည်းတော့ ထိသွားပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ပေါ့လေ။ ဘယ်လိုခံစားရသလဲ၊ စိတ်မ၀င်စားရင်တော့ ရှင်းမပြတော့ဘူး။ အပိုအလုပ်တွေ လုပ်တယ်လို့ပြောမှာစိုးလို့ပါ။ သာဓု သာဓု။ တကယ်တော့ သာဓုဆိုတာ (Sadhu) ဆိုပဲ။ အော် ဆိုးလင့်တေး ဆိုးလင့်တေး။
ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီးကလည်း သူတို့လိုပဲလို့ ပြောထားကြလေရဲ့။ အနီရောင်စာပိုဒ်တွေကို ဖတ်ကြည့်လေ။ ရွာက ဘုန်းတော်ကြီးကိုလည်း ဒီအကြောင်းလေး လျှောက်ရဦးမယ်။ ရွာက ကိုရင်လေးတွေကို ပရိတ်ကြီးတွေချည်း ဖိကျက်ခိုင်းမနေနဲ့လို့ တပည့်တော်တို့ ကိုယ်တော်ကြီးတော့ အင်္ဂလိပ်စာတွေနဲ့ ဆော်ကုန်ကြပြီလို့။
မရမ်းရောင်စာပိုဒ်လေးကိုလည်း မှတ်ပေးပါဦး။ နောင်ရေးချင်တဲ့ စာလေးတစ်ပုဒ်အတွက် အကိုးအကားလေးပါ။ ဗာရာဏသီမှာ ဆာဒူး(အမှန်တကယ် ဆာဓူးလို့စာလုံးပေါင်းမှ မှန်မှာပါ Sadhu ကိုး)တွေကို ဂင်္ဂါမြစ်ကမ်းပါးမှာ တွေ့ရတုန်းပါ။ တွေ့နေရဦးမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့တွေ့နေရတဲ့ သူတို့အကြောင်းကို ရေးချင်နေတာပါ။ ဒီဖော်ပြထားတဲ့ အကိုးအကားလေးကို ဖတ်ပြီးရင်တော့ ဆက်ဆွေးနွေးကြသေးတာပေါ့။ သမိုင်းပညာရှင် ဒေါက်တာသန်းထွန်းကတော့ သူ့ရေးဦးစစာအုပ်တစ်အုပ်မှာ “ဒီစာအုပ် ဖတ်ကောင်းရန်တာဝန်မယူ”ဆိုလား ဖော်ပြဖူးဆိုပဲ။
ဒါပေမယ့် ပြောပြချင်တဲ့ အိန္ဒိယရဲ့ ဘာသာတရားတွေနဲ့ ဗုဒ္ဓအရှင်ဖြတ်သန်းခဲ့ရပုံအကြောင်းကတော့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာကောင်းကြောင်းသေချာပါတယ်။
အိန္ဒိယမှာပဲ ဘုရားရှင်ပွင့်ခွင့်ရတဲ့ အခြေခံအကြောင်းတွေကလည်း သဘာဝယုတ္တိကျလွန်းနေပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါလေးတော့ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး။
Posted by ဓမ္မဂင်္ဂါ at 10:59 AM
dhammaganga.blogspot.com is very informative. The article is very professionally written. I enjoy reading dhammaganga.blogspot.com every day.